Ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali beBhola eKhatywayo baseBelgian I-Story ye-Childhood ye-Michy Batshuayi I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlaus Genius eyaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso "Batsman". Ibali lethu leMichy Batshuayi yobuntwaneni kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, imvelaphi yentsapho, ubuhlobo bentsebenziswano, kunye nezinye iinjongo ze-OFF (ezingaziwa) malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi ukukwazi ukukhupha iinjongo ezimangalisa kodwa zimbalwa zijonga uMichy Batshuayi's Bio onomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
Indaba kaMntwana waseMichu Batshuayi I-Untold Biography Facts-Ubomi Bokuqala Nentsapho
Ukuqala, Michy Batshuayi Atunga wazalwa ngomhla we-2X ka-Oktobha 1993 eBrussels, eBelgium. Wazalelwe unina, uViviane Leya Iseka kunye noyise, uPino Batshuayi. Bobabini abazali bavela kwiNtshonalanga yaseAfrika baze balandele iinjongo zabo kwiDemocratic Republic of Congo. Bathuthela eBelguim befuna izidlelo ezizeleyo kunye nokunyamekela abantwana babo engakazalwa.
Ekhulayo eBrussels, u-Young Batshuayi wayencedwa ngabazali bakhe abathanda imidlalo abamkhuthaza yena kunye nomntakwabo UAron Leya Iseka (kunye nomdlali webhola lebhola) ukuphuhlisa nokwenza imidlalo ababeyithandayo.
Inkxaso yabo yayinyuselwa ngokugqithiseleyo kukuba uBhatshuayi wabonisa amandla okubhola ebhola okwakungamenzanga nje kuphela phakathi koontanga bakhe kodwa waxuba umntakwabo omncinci naye owakhe wathatha inxaxheba kwibhola.
Kungekudala ngaphambi kokuba abazali bakaBatshuayi banikezele ukunyaniseka kwebhola yebhola ngokumbhalisa kwi-academy ye-youth, i-RFC Evere, kuqala kwiqela lebhola eline apho eqala khona umsebenzi wakhe.
Indaba kaMntwana waseMichu Batshuayi I-Untold Biography Facts-Career Buildup
Umdlalo webhola owenziwe nguBatshuayi ngexesha lakhe elincinane kwiiklabhu zelutsha wayezimisele ukuyenza ixesha elide kunye nebhola ngaphandle kokudlulela, into eyenza ukuba iqabane lakhe libheke njengelonwabo.
Nangona kunjalo, wafumana ubutyebi kubadlali abavela kwezinye iiklabhu ezazibona ngaphaya kobugovu. Ukuphawula phakathi kwenkqubela yakhe yolutsha kwakunokufudukela kwi-club ye-Anderlecht yolutsha kwi-2007 apho wayedlala khona kwiziko eliphambili kunye neenjongo.
Ifom yakhe ephezulu ayizange ibonwe yinkampani ye-rival Standard Liège eyayigcina iinkonzo zayo kwi-2008. UBatshuayi wazenzela i-club yakhe ngemidlalo yakhe emangalisayo kwaye wakhuthazwa kwiqela eliphezulu xa ekhulile i-18.
Indaba kaMntwana waseMichu Batshuayi I-Untold Biography Facts-Ukunyuka Kwegama
UBatshuayi wayengomnye ukulahlekelwa inkqubela phambili kwimisebenzi ayeyithandayo. Ifomu lakhe eligcinwe phezulu limbonile ukuba libala imigomo ye-21 ngexesha le-2013 / 2014 ngexesha le-Standard Liège. Umdlalo phakathi kwamanye amaninzi wamenza wamphumelela i-Ebony Shoe Award enikwa abadlali abagqwesileyo beAfrika abaseBelgium.
UBhatshuayi waqhubeka nokukhangela kwakhe ubugcisa eMarseille, iqela laseFransi alibhalisele kwi-2014. KwakuseMarseille ukuba ifomu lakhe lokugcina iinjongo lithatha umdla kumaqela angamaNgesi aphezulu kuquka i-Chelsea FC ne-Westham. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
Indaba kaMntwana waseMichu Batshuayi I-Untold Biography Facts-Ulwalamano lobomi
UBatshuayi ungomnye wabadlali abancinci bebhola bebhola ezithandayo ngobomi babo bomtshato. Oku kuye kwagcina wonke umntu ecinga ukuba ngubani owona mfanekiso okhangayo onokubethandana naye okwangoku.
Akukho ntombi ibonwe kunye naye kwisiganeko okanye ukuphuma. Ngelixa abaninzi bakholelwa ukuba ulungile ukugcina ubomi bakhe abucala ngasese, abanye bakholelwa ukuba yinto nje yexesha ngaphambi kokutyhila i-wag okanye intombi yakhe. Qiniseka, siza kubonelela ngokuhlaziywa kophuhliso kulo mbandela njengoko kuvela.
Indaba kaMntwana waseMichu Batshuayi I-Untold Biography Facts-Iingxaki kunye nezilinganiso zeFIFA
U-Michy uphakathi kwabadlali abanomdla ngokubaluleka kwakhe kwi-EA Sports 'umdlalo webhola webhola lebhola. Jonga indlela asabela ngayo kwi-2018 FIFA ekhutshwe ngezantsi;
Indaba kaMntwana waseMichu Batshuayi I-Untold Biography Facts-Kubonakala ngathi kungafanelekanga
Ngoxa uBatshuayi wayese-Chelsea, wangena phantsi komlilo omkhulu emva kokuba umdlalo womdlalo onqabileyo wabonakala ukumbamba Alvaro Morata ukulahlekelwa isohlwayo. Isiganeko senzeke ngexesha lokuhlaselwa kwe-Chelsea ku-Arenal ekupheleni kwe-2017 yoluntu ukhuseleko. UBatshuayi wathatyathwa nguMorata ngexesha lomzuzu we-74th yomdlalo ngenxa yokungaphumeleli.
Umdlalo uphitswe nge-1-1 umdwebo, ushiye izigwebo ukuba ugqibe isigqibo. Alvaro Morata kunye Thibaut Courtois Iimpazamo eziphosakeleyo zikhawuleze zibona iArsenal iphumelele umdlalo. Yintoni eyenze abalandeli bacaphuke xa kubonakala imifanekiso ebonisa ukuba uBatshuayi uhleka emva koMorata owakubonakele ngokulahlekelwa nguye.
Nangona kunjalo, uBatshuayi waya kwi-Twitter emva kwexesha ukulungisa oko wathatha njengengcamango ephosakeleyo ngokuqaphela ukuba:
"Ngaba abantu abathile bakholelwa ukuba ndihleka kunye kunye nam / okanye silahlekelwa? Uxolo ukuba ndidideke kodwa ndingekho "
Indaba kaMntwana waseMichu Batshuayi I-Untold Biography Facts-Uthando lwamahlaya
I-Batshuayi inomsebenzi wokubukela kwaye ulandele iichungechunge zekhathuni. Umsebenzi owodwa wemisebenzi yakhe yokuziqhelanisa unempembelelo ephezulu ngaphezu kwezozonwabisa njengoko ifuna ukuba ifashini. Kuphawuleka phakathi kwabalinganiswa bakhe abathandayo beCaton Bob kwaye akaze abonakale anelisekile ngeetoto zeSponge Bob.
Ukongezelela, wayekhe wambona egqoke umbhokisi wecala phantsi kwekiti. Umbhokisi wenqwelo-mfanekiso (ochazwe ngezantsi phantsi kwe-shorts evulekileyo) ubonisa umlingiswa oselwandle olunzulu phantsi kwekiti yakhe. Eneneni ukuthanda kwakhe i-cartoon ayinayo imida.
Indaba kaMntwana waseMichu Batshuayi I-Untold Biography Facts-I-Big Kid kwiNtliziyo
UBatshuayi ungomnye ongabonakali ukuba enze iminyaka yakhe njengobungqina beqoqo lakhe lemidlalo. Umntu oneminyaka eyi-25 unesiqoqo esikhulu samathoyizi awakuchaza njengemyuziyam yakhe. "I-museum yendalo" ibonisa ikhabhinethi enkulu egciniweyo egcwele amathoyizi athobileyo.
Akunjalo nje amathoyizi amancinci, uBatshuayi ubonakala efumana ithoyizi enkulu ebonakala ifana neminyaka yakhe. Isifanekiso sayo esipheleleyo kwi-cartoon eyaziwayo yi Dragon Ball Z.
Indaba kaMntwana waseMichu Batshuayi I-Untold Biography Facts-Izizathu Ezibhekiselele kwiNickname
Ngenxa yokuthanda kwakhe ii-comics, uBatshuayi wanikezwa ngeqheno elithi 'Batsman', umlingwa ayithandayo kwaye uchaza naye. Umlingiswa weBatman uthathwa njengomnye ovela ebumnyameni ukwenza into engacatshulwayo.
UBatshuayi uvela kwibhentshini kwaye usenza umlingo wokuvelisa iinjongo. Ukuthetha ngeenjongo, i-Michy's FIFA ye-FIFA yeHlabathi yeNdebe yeHlabathi yeNgcaciso yeNgcaciso yeNdebe yeNdebe yeNdebe yeNdebe yeNdebe yeNdebe yeNdebe yeNdebe yeNdebe yeNdebe yoMhlaba iphumelele.
Indaba kaMntwana waseMichu Batshuayi I-Untold Biography Facts-Ubuntu
UMichy Batshuayi ngumntu othanda izinto azenzileyo aze aqhube umxhwankqiso nangona izinto zingahambi ngendlela aceba ngayo. Nangona kunjalo, usebenza nzima kwaye uzama okusemandleni akhe ukwenza ukuba izinto aziphumelele zikhangeleke.
Ukongezelela, uhlala enentlalontle, unengqondo yokudibanisa kunye kwaye uzama okusemandleni akhe ukuphepha.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda iNdaba yeMichu Batshuayi yobuntwana kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
I-Maurizio Sarri Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: nge-30 kaJanuwari ngo-2019
I-Reece James Ubuntwana Ibali leNqaku leNgcaciso yeBlog yeNqaku